बामदेवलाई यसकारण बनाउनुपर्छ प्रधानमन्त्री - Muldhar Post
गोबिन्द थापा– नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने भनी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव सुनेर धेरै मानिस खुसी भएका छन् । यो प्रस्ताव सुनेर खुसी हुनेमा आम जनता र खासगरी नेकपाका कार्यकर्ता देखिएका छन् । कतिपयलाई यो प्रस्ताव अस्वाभाविक लागेको छ । कतिपय नेता चाहिँ ‘अध्यक्ष ओलीले नै प्रस्ताव गरेपछि अब बामदेव प्रधानमन्त्री बन्ने भए’ भनी छाती पिट्दै रोइकराई गरिरहेका छन् । त्यस्ता नेताहरु यो प्रस्तावलाई कसरी विफल पार्न सकिन्छ भनेर उछलकूद गरिरहेका छन् ।
लेखक गोबिन्द थापा
यति महत्वपूर्ण प्रस्तावमा विभिन्न खालका क्रियाप्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक हो । किनभने बामदेवलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने भनी अध्यक्ष ओलीले राखेको प्रस्तावसँग देश र जनताको सुनौलो भविष्य गाँसिएको छ । बामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्नु सम्भव कि असम्भव ? यो बहसको विषय छ । यो बहसमा पहिलो वाक्यमै लेखिहालौं– केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न हुने, उनैका सहयोद्धा तथा सहपुस्ताका बामदेवले चाहिँ किन नहुने ? खासगरी नेकपाको पार्टी पंक्तिले बुझ्नुपर्ने र मनन गर्नुपर्ने कुरा हो यो । प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरुभन्दा बामदेव कुनै दृष्टिले अयोग्य छैनन्, बरु योग्य छन् ।
कतिपय नेताहरु संविधान अनुसार बामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छैन भनिरहेका छन् । राजनीति एउटा वृहत् प्रक्रिया हो । राजनीति भनेको कूवाको पानी जस्तो स्थिर हुँदैन । राजनीति चलायमान हुन्छ । वृहत् राजनीतिक प्रक्रिया भित्रकै एक अंग हो संविधान र कानुन । संविधानले राजनीति जन्माएको होइन, राजनीतिले संविधान जन्माएको हो । तसर्थ, संविधान संशोधन गरेर मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ । बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बनाए पनि हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित गरेर बनाए पनि हुन्छ । नेकपाका एकसे एक सांसद्हरु बामदेवलाई आफ्नो क्षेत्रमा लगेर निर्वाचित गर्न लालायित छन् । आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव लड्ने नेता प्रधानमन्त्री बनाउन पाइयोस् भनेर जनता पनि बामदेवको स्वागत गर्न आतुर छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्न हुँदैन भनेर नेकपाका कतिपय नेताले भनिरहेको सुनिन्छ । के बुझौं भने माथिल्लो सदनका सदस्य प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था विश्वका धेरै देशमा छ । छिमेकी भारतमा पनि यही व्यवस्था छ । नरेन्द्र मोदीभन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह त्यहाँको राष्ट्रिय सभाका सदस्य थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्यकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्था विश्वका लागि सामान्य हो । यस्तो व्यवस्था गर्दा केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा आकाश खस्न पनि सक्ला तर संवैधानिक प्रक्रिया भत्कँदैन, बिग्रँदैन ।
बामदेव गौतम चुनाव हारेको नेता कसरी प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ ? यसो गर्दा जनमतको अवज्ञा हुन्छ भन्ने नेताहरु नेकपाभित्रै उत्पति हुनु अनौठो हो । आज नेकपाको जे हैसियत छ, नेताहरुको जे हैसियत छ त्यसमा बामदेवको ठूलो योगदान छ भन्ने उनीहरुले बिर्सिएका छन् । हो, बामदेवले गत आमचुनावमा प्राविधिक रुपमा हारेका हुन् । तर, चुनावमा जित्नेले सदाका लागि जित्दैन, हार्नेले सदाका लागि हार्दैन । बामदेवलाई पुन चुनावी प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ र लानु पनि पर्छ । जनताको चाहना र देशको आवश्यकता निरन्तर बदलिन्छ । देशलाई केपी ओलीको उत्तराधिकारीका रुपमा बामदेव गौतम चाहिएको छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।
०१४ सालको आमचुनावमा कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनावमा पराजित भए । तर, उनलाई प्रतिनिधि सभा अर्थात् तल्लो सदनमा लगेर मनोनीत गरी सभामुख समेत बनाइयो । उनै कृष्णप्रसाद भट्टराई ०४८ को आमचुनावमा पराजित भएपछि निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बने । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक क्षेत्रबाट चुनाव हारे, अर्काे क्षेत्रबाट जिते । एकठाउँबाट हार्नु पनि हार्नु नै हो भन्न सकिएला नि, होइन र ? तैपनि प्रधानमन्त्री बने ।
तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल आमचुनावमा पराजित भए तर तत्कालै संविधान सभामा मनोनीत भएर प्रधानमन्त्री बने । भारतको संविधानसभाका अध्यक्ष भिमराव अम्बेडकर निर्वाचित भएकै थिएनन्, उनलाई जवहारलाल नेहरुले मनोनीत गराएर अध्यक्ष बनाएका थिए । राजनीतिमा समयको माग र देशको आवश्यकता बुझेर विभिन्न कदम चाल्नुपर्छ । बामदेवलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित गर्नु देशको अहिलेको आवश्यकता हो, जनताको माग हो ।
यसमा अनौठो कुरा के छ भने बामदेवको नाममा आम जनताको आपत्ति छैन, अन्य दलका नेताहरुको पनि आपत्ति छैन तर नेकपाकै खास प्रवृत्तिका नेताहरुको चाहिँ विरोध देखिन्छ । आमचुनावमा हारेका मानिस पनि मन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान अनुसार संविधानसभा कालखण्डमा धेरै मानिस मन्त्री बनेका थिए । तसर्थ, राजनीतिमा चुनाव हार्नु र जित्नु स्थायी चिज होइन । आज जितेको मानिसले भोलि चुनाव हार्छ, आज हारेको मानिसले भोलि चुनाव जित्न सक्छ । कोही व्यक्तिले चुनाव हार्नु र जित्नुले उसको समग्र राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्न सक्दैन । त्यसैले बामदेवले चुनाव हार्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । चुनाव हारेकै कारण बामदेव अयोग्य हुन् भन्न मिल्दैन ।
जसरी अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उनको नेतृत्वको सरकारले उत्कृष्ट काम गरे पनि दुराग्रहपूर्ण प्रचार गरिँदैछ । त्यसैगरी बामदेव विरुद्ध पनि दुष्प्रचार गरिँदैछ । बामदेव इमानदार नेता भए पनि उनी विरुद्ध धेरै पटक धेरै खालको दुष्प्रचार भएको छ । निष्ठा र इमानका दृष्टिले बामदेव नेकपाका अब्बल तर अभागी नेता हुन् । बामदेवले सबैलाई बनाए, सबैलाई योगदान गरे तर आफूलाई बनाएन् । त्यसैले अहिले बामदेवलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउन केपी ओली अगाडि सर्दा विरोध गर्नु मनासिब हुँदैन ।
तत्कालीन एमालेको कुरा गर्ने हो भने त्यसबेला नेकपाका कार्यकर्ताको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेका मुख्य दुई नेता थिए– केपी ओली र बामदेव गौतम । यी दुई नेता एक ठाउँ हुँदा, एक ठाउँ उभिँदा त्यसबेला देशको अवस्था फेरिएको थियो, तत्कालीन नेकपा एमालेको हैसियत चुलिएको थियो । अब नेकपामा यी दुई नेता एक ठाउँ आउने बातावरण बनेको छ, अहिलेको आवश्यकता यही हो । वर्तमान राजनीतिक खिचातानी आम जनता र कार्यकर्ताका लागि दुखद छ । यो खिचातानीका बीच पनि दुई नेता केपी ओली र बामदेव गौतम मिलेर मुलुक र पार्टीलाई अझ उत्साहसाथ अगाडि बढाउने बातावरण निर्माण हुँदैछ । यो सुखद पक्ष हो ।
कतिपयले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने केपी ओलीको प्रस्तावलाई अविश्वसनीय भनेका छन् । नपत्याउनु भन्दै हल्लाखल्ला गरिरहेका छन् । कालो कोठाभित्र गोप्य मिटिङ गरिरहेका छन् । एकातिर अविश्वसनीय प्रस्ताव भन्ने अर्कातिर त्यो प्रस्ताव असफल पार्न षडयन्त्र गरिरहेका छन् । सत्य के हो भने बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव केपी ओलीले कानमा खुसुक्क राखेका होइनन् । कालो कोठाभित्र भनेका होइनन् । केपीले बामदेवलाई अगाडि सारेर कालोकोठे राजनीति गरेका होइनन् ।
बकाइदा सचिवालयको औपचारिक बैठकमा अध्यक्षको हैसियतले प्रस्ताव राखेका हुन् । कसैको कानमा नभएर, कसैको गुटको बेलामा नभएर सचिवालयमा सबैका सामु प्रस्ताव राखेका हुन् । सचिवालय बैठकपछि पनि विभिन्न नेता तथा सांसद् एवं जिम्मेवार कार्यकर्ता बीचमा आफूले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाएरै छाड्ने घोषणा गरेका छन् । खुलेआम गरिएको घोषणालाई छलछाम भन्ने अनि प्रतिपक्षी तथा रहस्यमय पात्रहरुसँग कालो कोठामा राखिएका प्रस्तावहरुलाई चाहिँ विश्वसनीय र आधिकारिक ठान्ने ? यो हुन सक्दैन ।
यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने केपी शर्मा ओलीबाट बामदेवलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव किन आयो ? किनभने केपी ओली र बामदेव विगतमा फरक समूहमा रहँदा पनि आपसमा मिल्ने नेता हुन् । मुलुक र पार्टी संकटमा पर्दा आपसी सहकार्य गरेका नेता हुन् । संकटमा एकले अर्कालाई साथ दिएका छन् । दुवै नेता प्रष्टबादी र हक्की छन् । दुवै एक्शन ओरियन्टेड नेता हुन् । यति कारणले मात्र अध्यक्ष ओलीले बामदेवलाई प्रस्ताव गरेका चाहिँ होइनन् । केपी अध्यक्ष हुन्, बामदेव उपाध्यक्ष हुन् । अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई अगाडि सार्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । अर्काे कुरा, नेकपाको शीर्ष तहमा जेजति नेता छन् उनीहरु विगतमा प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, बामदेव मात्र हुन बाँकी छ । यसकारण पनि अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष बामदेवलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्पष्टसँग अगाडि बढाउन चाहेको प्रष्टै देखिन्छ ।
केपी र बामदेवको काम गराईको स्प्रीट मिल्छ, विचार मिल्छ, विकासप्रतिको दृष्टिकोण मिल्छ । दृढ स्वभाव र संकल्प पूरा गर्ने स्वभाव मिल्छ । सपना देख्ने र त्यो सपनालाई व्यवहारमा उतार्ने जुझारुपना मिल्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान उच्च राख्नुपर्छ भन्ने चिन्तन मिल्छ । नेपाल गर्व गर्न लायक देश हो भन्ने दृष्टिकोण मिल्छ । यसकारण केपी ओलीले बामदेवभित्र आफ्नो प्रतिरुप देख्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले केपीले बामदेवलाई नै प्रस्ताव गरेका हुन् भन्ने नेकपाभित्रका इमानदार कार्यकर्ता सबैले बुझेका छन् ।
मुख्य कुरा, व्यक्ति केपीले अर्का व्यक्ति वामदेवलाई प्रस्ताव गरेका होइनन्, अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष बामदेवलाई प्रस्ताव गरेका हुन् । यो स्वाभाविक छ र जायज पनि छ । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु नेकपाका नेताहरुको कर्तव्य हुन आएको छ । नेकपामा नेताहरुको ठूलो पंक्ति छ । सबै नेताका आआफ्नै प्रकारका गुण र विशेषता छन् । अहिलेको सन्दर्भमा केपी ओली र बामदेवको टिमले सरकार हाँक्नुपर्छ भन्ने आम बुझाई हो । यसमा बिर्सन नमिल्ने तथ्य के हो भने अहिले प्रचार भए जसरी सरकार ढल्ने अवस्था छैन ।
नेकपाका सचिवालयका सम्पूर्ण सदस्यहरुले एकमत भएर गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार पाँच वर्ष चलाउने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयबाट कोही पनि भाग्न पाउँदैन, कसैले पनि बेइमानी गर्न पाउँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो उत्तराधिकार तयार पार्न खोजेका छन् । यसैका लागि उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने राजमार्ग खन्ने कुरा गरेका हुन् भनेर कसैले बुझेको छैन भने उसले बुझ्पचाएको हो । यो कुरामा कसैले छलछाम देख्छ भने उसको दृष्टिदोष हो ।
सबैलाई थाहा भएको र सबैले देखेको कुरा के हो भने नेकपाका मुख्यगरी दुई नेता केपी ओली र बामदेव गौतममा केही गरौं देशका लागि भन्ने हुटहुटी छ । विगत ०५४ सालमा बामदेवको नेतृत्वमा तत्कालीन एमालेले स्थानीय चुनावमा शानदार विजय हासिल गरेको थियो । गत चुनावमा केपी ओलीको नेतृत्वमा वाम गठवन्धनले करिब दुई तिहाई मत ल्याएको हो । आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेका यी दुई नेताको सहकार्यले आगामी दिनमा नेपाल, नेपाली जनता र नेकपाको भविष्य अझ उज्जवल हुनेछ र देशले स्थिरता पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । सनराइज खबरबाट साभार ।